China Factory mpamono afo sy mpamono afo | Weicheng
Anaran'ny vokatra Saron-tavy fandoroana tariby
Modely famaritana 25kg / barika
Sehatra fampiharana Ampiasaina be izy io amin'ny herinaratra sy ny tariby fitsaboana maharitra ny jiro, ny indostria ary
fitrandrahana, fifandraisan-davitra ary tranobe sivily;
azo ampiasaina amin'ny fiarovana afo amin'ny kitay koa izy io
firafitra, firafitra vy ary mora may
substrates amin'ny injeniera ambanin'ny tany.
Tombontsoa momba ny vokatra 1. Sarimihetsika mahia ary fanoherana afo2 tena tsara. Fanamboarana mora, fanosotra, famafazana sns.
3. Fiatrehana afo tsara sy fanoherana rano
4. Ny sosona spaonjy spaoro mirindra sy matevina dia natsangana taorian'ny afo,
izay misy fiantraikany lehibe amin'ny afo sy ny hafanana
Ny fantsom-pandrefesana tariby tariby karazana CDDT-AA dia karazana firakotra ahi-afo vaovao novolavolain'ny orinasanay araka ny fenitry ny minisiteran'ny filaminam-bahoaka GA181-1998. Ny vokatra dia voaforona karazan-afo maharitra, plastika sns. Io no tariby efa mandeha amin'ny rano sy herinaratra ao amin'ny firenena.
Ity vokatra ity dia be mpampiasa amin'ny fitsaboana maharitra ny tariby sy ny tariby amin'ny toby famokarana herinaratra, toeram-pitrandrahana, fifandraisan-davitra ary tranobe sivily. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fiarovana afo amin'ny fitaovana mora may mora amin'ny firafitry ny hazo, tranobe vita amin'ny vy ary injeniera ambanin'ny tany.
Alohan'ny hananganana sarina tariby misy afo maharitra, ny vovoka mitsingevana, ny loton'ny solika ary ny masoandro amin'ny tampon'ny tariby dia diovina sy diovina, ary ny fanamboarana ny firakotra maharitra dia azo tanterahina aorian'ny maina ny tampony.
Ny fonosana maharitra amin'ny afo ho an'ny tariby dia hofafazana sy hodiovina ary haroina sy hampiasaina mitovy. Rehefa somary matevina ilay firakotra dia azo esorina amin'ny rano paompy araka ny tokony ho izy hanamorana ny famafazana.
Ny fiarovana ny rano sy ny fanoherana ny fandotoana dia tokony harovana ara-potoana sy alohan'ny fananganana.
Ho an'ny tariby sy tariby misy hoditra plastika sy fingotra, ny hatevin'ny savony dia 0,5-1 mm, ary ny haben'ny firakotra dia manodidina ny 1,5 kg / m, ho an'ny tariby voarindrina feno fonosana diloilo dia hosaronina lamba vera aloha , ary avy eo ampiharina ilay firakotra. Raha atao any ivelany na amin'ny tontolo mando ny fanamboarana dia ampidirina ny varnish mifanentana.
Ny fonosana vita amin'ny afo dia tsy maintsy apetraka amin'ny barika vy na plastika.
Ny fonosana maharitra amin'ny afo dia tokony hotehirizina anaty tontolo mangatsiaka sy maina ary misy rivotra.
Rehefa mitondra dia tokony harovana amin'ny masoandro ny vokatra.
Herintaona ny fe-potoana mahomby amin'ny firaketan-drakitra fampidiran-dranon'afo.
Previous: Fanamafisam-peo matevina amin'ny elastika
Manaraka: Lamba tsy misy kitapom-batsy sy Tape Silicone